တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ချူအင်လိုင်း ပုဂံဒေသသို့ လာရောက်လည်ပတ်ခြင်း (၅၈)နှစ်ပြည့် အထိမ်း? - Yangon Media Group
ညောင်ဦး၊ ဇန်နဝါရီ ၈
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ပုဂံညောင်ဦးရှေး ဟောင်းယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေသို့ တရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ချူအင်လိုင်း မြန်မာ- တရုတ် ချစ်ကြည် ရေးခရီးစဉ်အဖြစ် လာရောက်လည် ပတ်ခဲ့ခြင်း (၅၈) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံး မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် တရုတ်- မြန်မာဆွေမျိုးပေါက်ဖော်များ ပရဟိတလှူဒါန်းပွဲကိုဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက ညောင်ဦးမြို့ ရွှေစည်းခုံဘုရား အရှေ့ဘက်စောင်း တန်းရှိ ချူအင်လိုင်းတန်ဆောင်း၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံရုံးမှသံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Hong Liang က တရုတ်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲစေရန် ရည်ရွယ်၍ တရုတ် နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ချူအင်လိုင်း မြန်မာ-တရုတ် ချစ်ကြည်ရေး ခရီး စဉ်အဖြစ် လာရောက်လည်ပတ် ခြင်း (၅၈) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ပရဟိတလှူဒါန်းပွဲအား ကျင်းပရခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြား ပြီး သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုက ဒေသခံပြည်သူ များကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Hong Liang နှင့် ဇနီး Mrs. Wang Xuehong၊ သာ သနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသူရဦး အောင်ကို၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီးစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန် ကြီးဦးမြတ်သူ၊ မြန်မာ-တရုတ် ချစ် ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန် ရှိသူများက ညောင်ဦးမြို့နယ် အတွင်းရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုဝင်များ ကိုယ်စား ညောင်ဦးမြို့ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၆) ရပ်ကွက်၊ ပုဂံမြို့သစ် ရွှေတွင်းရပ် ကွက်နှင့် ပုဂံမြို့ဂန့်ဂါရပ်ကွက်တို့ မှတာဝန်ရှိသူများထံသို့ မရှိဆင်းရဲ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ၁ဝဝ အတွက် အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင် ငွေကျပ်တစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် စုစုပေါင်း လှူဒါန်းငွေ ကျပ်သိန်းတစ်ရာဖိုးရှိသော စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း၊ အိမ်သုံး ဆေးဝါးများနှင့် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း မျိုးစုံတို့ပါဝင်သော လှူဒါန်းပစ္စည်း ၂၄ မျိုးတို့အား လွှဲပြောင်းပေးအပ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
(၇၁) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ ပွဲတော်ကို ပြည်နယ်မြို့တော် ဟားခါးမြို့ ၌ ကျင်းပမည်
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၌် မီးလောင်ကျွမ်းမှု ၂၁၅ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် မန္တေ??
ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေးတွင် ဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်းအပေါ် ဆုလာဘ်အဖြစ်ခံယူဟု သူရဦးရွှေမန်းဆို
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မအနှစ်ဖြင့် ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းအောင် ကြိုးစားကြရန် ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်